Farta ku garaac tatooyo | Tattoo
Tattoo fargalinta farta
Susana Garcia | | Tattoos, Tattoos leh qaabab
Wareegyadu waxay noqon karaan a qurxinta fudud ama leh astaamo badan, maaddaama qaarkood yihiin ballanqaad ama guur. Markaa arrimaha ku saabsan siddooyinku farta ku fiiqeen faraha, waxaan isla fikrad ahaan leenahay Qaarkood waxay ku raaxeysan doonaan inay farahooda ku daraan nashqado casri ah oo qurxin ah si ay u xirtaan giraan socon doona inta uu nool yahay kuwa kalena waxay rabaan inay wax ku muujiyaan faraantigaan astaanta u ah.
Aan aragno fikradaha qaar ka mid ah farta kaatunka farta. Waa inaan ogaano inay tahay aag jilicsan, oo aan inta badan ku dareemno xanuun ka badan kuwa kale iyo xirashada maqaarka calaacasha ayaa ka weyn, marka waqti kadib waa inaan taabanaa, laakiin marwalba waa u qalantaa haddii naqshaddu jeceshahay.
1 Tattoo giraan giraan ah
2 Tattoo giraanta asalka ah
3 Fikradaha kale ee farta
Tattoo giraan giraan ah
Mid ka mid ah fikradaha ugu fiican ee aad sameyn karto haddii aad rabto abuurista ballanqaad qof kale waxay siineysaa giraan calaamad u ah tan. Laakiin haddii aynaan rabin wax shey ah, laakiin wax waqti ku sii jiraya, waxaan haysannaa fikrad weyn oo ah in farta lagu gashado farta. Waa suurtagal in la helo labo shaati oo isku mid ah, laakiin sidoo kale fikrado kala duwan, sida xarfaha, qaababka ama taajyadaas qosolka badan.
Tattoo giraanta asalka ah
Ma aha in qof kastaa doonayo tattoos giraan si uu u matalo kaqeybgal. Qaar uun Waxay raadinayaan fikrado qurxin sida kuwan oo kale asal ah. Garab naga caawiya duulista ama dahabiga dahabka ah ee Harry Potter ee loogu talagalay taageerayaasha filimka. Had iyo jeer waxaa jira fikrado yaryar oo loogu talagalay noocyada noocan oo kale ah, laga bilaabo silhouette ee bisad illaa bawdada, dhammaantood waxay kuxiran yihiin fikradda aan haysanno.
Fikradaha kale ee farta
Waan jecel nahay iyaga tattoos aad u yar mana waayi karaan qaab giraan ah. Khadadka waa isbeddel iyo tatoo aan ka bixi doonin qaabka. Fikrad kale waa tan ubaxa, iyadoo giraantaas lagu sameeyay caleemo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoo fargalinta farta
Tattoo qolofta badda, ururinta naqshadaha iyo tusaalooyinka
Tattoo Libaaxii Yahuuda, wakiilka Yuhuudda iyo Masiixiyiinta